WHO:Tirada uu haleelay shubanbiyoodku Yemen waxay gaadhay in ka badan 600 kun xaaladood - Horn Future
WHO:Tirada uu haleelay shubanbiyoodku Yemen waxay gaadhay in ka badan 600 kun xaaladood
Geneva (Horn Future)-Ururka Caafimaadka Dunida ee (WHO) ayaa sheegay in tirada cudurka shuban-biyoodku uu haleelay ee Yemen ay gaadhay 612,703 xaaladood,isku celcelis ahaan qiyaastii 3,000 maalintii, iyadoo uu socdo dagaalku iyo sii xumaanshaha adeegyada caafimaadka iyo saboolnimada baahsan ee ka jirta.
Waxa cudurka shuban-biyoodka guud ahaan u dhintay dad gaadhay 2,048 qof tan iyo markii cuu bilowday bishii April ee hore iyadoo ay ka sii darayso waaxda caafimaadka ee dalka sababo la xidhiidha dagaalka wali ka socda iyo saboolnimo baahsan ee ka jirta magaalooyinka uu saameeyay iyo xarumaha barakaca.
Ururada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ayaa waxay gargaar u fidiyaan dadka ku nool xaaladaha aadka u ba’an ee bini’aadanimo ee ka dhashay dagaalka ka socda dalka muddo ka badan 2 sanadood iyo badh iyada oo uu kusoo beegmay faafidda cudurkan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ku dhawaad 15 malyuun oo Yemeni ah aynan heli karin daryeel caafimaad oo ku filan sababo la xidhiidha xarumaha caafimaadka oo dagaaladan socda ay ka dhigeen hawl-gab.
Tan iyo dayrtii 2014 ayaa waxa dalka Yemen ka socda dagaalo u dhexeeya argagixisada shiicada xuutiyiinta tirada yar oo talada xoog kula wareegtay iyo kaligii-taliyihii laga eryay xilka oo isku dhinac ah iyo taageerayaasha Cabdi-rabo Mansuur oo u badan dad is-abaabulay si ay uga hortaggaan kooxdan.
« Kenya: Opposition spurns new date for presidential poll	» Persecution of all Myanmar Muslims ‘on the rise’